युगसम्बाद साप्ताहिक - संविधानसभा छोडेर कोही पनि जाँदैन ः अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत
Thursday, 12.12.2019, 09:44am (GMT+5.5) Home Contact
संविधानसभा छोडेर कोही पनि जाँदैन ः अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत
Tuesday, 04.07.2015, 01:23pm (GMT+5.5)
० तपाईंहरूले जतिपटक वार्ता गरे पनि मिल्दै नमिल्ने भो । पछिल्लोपटक एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको बार्तामा कुरा कहाँ मिलेन ?
सहमतिको सम्भावना टाढिंदै गएको माघ ५ गतेदेखि नै हो । त्यसपछि माघ २८ गते सहमतिका लागि भन्दै संविधानसभाको बैठक स्थगित गरियो । तर, त्यसबीचमा पनि सहमतिका लागि खासै नयाँ ढंगले बहस भएन । यसबीचमा उहाँहरूलाई– तपाईहरू आन्दोलन नगर्नुस, हामी पनि संविधानसभाको बैठक केही दिन रोक्न आग्रह गर्छौ । सहमतिमा आउनको लागि भनेर हामीले भन्यौ । उहाँले आन्दोलन त रोक्न सक्दिन भनेपछि संविधानसभाको प्रक्रिया पनि रोक्ने कुरा त भएन । सहमतिको नाममा संविधानसभाको बैठक अनन्तकालसम्म रोक्ने कुरामा संविधानसभा अध्यक्ष पनि तयार हुनुहुन्थेन ।
० आन्दोलन नरोकिएको र संविधानसभाको बैठक आब्हान भैसकेको बेलामा अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
संविधानसभाको बैठक बस्छ, संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । संविधानसभामा आफ्नो एजेण्डा प्रस्तुत हुन्छ र वार्ता पनि सँगसँगै अघि बढ्छ । वार्ता अघि बढ्दा सहमति भयो भने सहमतिकै आधारमा संविधानसभाले पास गर्छ । यदि सहमति निर्माण हुनसक्ने अवस्था भएन भने पनि मतदानको प्रक्रियाबाट हुन्छ । यो त सर्वस्वीकृत प्रक्रिया हो । यो नियम विधानमा स्पष्टसँग लेखिएको छ ।
० त्यसो भए अब कांग्रेस र एमालेले प्रक्रियाबाट संविधान दिन आफूलाई अघि बढाए ?
विल्कुल, सहमति भए पनि आखिर प्रक्रियामा त जानु नै पर्छ । सहमति नभएप नि प्रक्रियामै जानु पर्छ । त्यसकारण प्रक्रियालाई रोक्नु हुन्न । जनताले निर्वाचन गरेको संविधानसभा छ । त्यो संविधानसभालाई बन्द गरेर पंगु बनाएर संविधानसभालाई एक किसिमले होस्टेज बनाएर लामो समयसम्म राख्न सकिदैन ।
० तर, विपक्षीहरूले प्रक्रियामा गएर सत्तापक्षले मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप छ । कतै त्यस्तै हुने सम्भावना पनि छ नि हैन ?
मुठभेड किन गर्ने ? प्रक्रिया मुठभेड हो र ? प्रक्रियामा जाँदा मुठभेड हुन्छ भनेर लेखिएको छ र ? विधिको शासनमा के मुठभेड हुन्छ भनेर लेखिएको छर ? मुठभेड भनेको विल्कुलै अबैधानिक र हिंसात्मक कुरा हो । डण्डा लिएर सडकमा जाने भन्ने कुरा हिंसात्मक हो कि होइन ? लाठी जुलुस निस्कनु ठीक कि बेठिक ? नेपाली जनताले कुनै किसिमको जुलुस चाहँदैन । लाठीले हिंसा गर्छ । त्यसैले त्यसलाई नेपाली जनता र सरकारले स्विकार्दैन ।
० तपाईंहरूले यसो भनिरहे पनि सडकमा अर्कै दृश्य देखिएको छ । त्यसको सामना कसरी गर्नु हुन्छ ?
सडकमा आउन चाहनेहरू सडकमा आउँछन । तिनीहरूलाई रोकटोक हुँदैन । तर नियम र विधी मिचेर हिंसात्मक ढंगले आउने, मुठभेड गर्ने, तोडफोड गर्ने काम हुन थाल्यो भने कानूनले आफ्नो बाटो लिन्छ ।
० त्यसो भए तपाईहरू आन्दोलन दवाउने योजनामा हुनु हुन्छ ?
यो तपाईको विचार हो । कानून बमोजिम शान्तिपूर्ण जुलसमा कसैले पनि आपत्ति गर्दैन । यदि हिंसा भडकाउने खालको, उत्तेजना बढाउने खालको काम गरे कानून अनुसार हुन्छ । संविधानसभालाई पंगु बनाएर, महत्वहिन बनाएर, सडकबाट तर्साएर, आतंकित बनाएर उहाँहरू आफ्नो किसिमको संविधान बनाउने नभए संविधानसभा नै भाड्ने षडयन्त्र हो भनेर बुझ्दा हुन्छ । यो षडयन्त्रमा हामी पस्न चाहँदैनौ । यो आशय स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसकारण हामी यसलाई सफल हुन दिदैनौं ।
० तपाईंको कुरा सुन्दा त अब संविधानसभाबाट संविधान दिने जिम्मेवारीबाट पछि हटिन्न हो ?
हट्ने नहट्ने कुरा होइन । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौ । त्यसकै लागि जनताको बीचमा गएका हौ । जनताबाट जनादेश प्राप्त छ । जनादेश प्राप्त सार्वभौम संविधानसभाले संविधान निर्माण गछर्् ।
० सडकबाटै सहमतिको बाटो तय गर्छौ भन्ने विपक्षी मोर्चालाई तपाईहरू अब के भन्नु हुन्छ ?
वार्ताको ढोका खुल्ला छ । हामी अहिले पनि वार्ता गर्न तयार छौ । सहमतिमा आउनको लागि प्रयास गर्छाै तर सहमति एउटाले मात्रै प्रयास गरेर हुँदैन । दुबै थरीले केही न केही आफ्ना पोजिसनहरू छाडेर सहमतिमा आउनु पर्छ । उहाँहरू मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर आफ्नै सर्तमा सहमति गर्न चाहनु हुन्छ भने सहमति हुन सक्दैन ।
० प्रक्रिया सुरु भए संविधानसभा छाड्ने चेतावनी विपक्षीले दिएका छन नि ?
लेखेर राख्नुस्, संविधानसभा छाडेर कोही पनि बाहिर जाँदैन । संविधानसभा छाडेर जानुको अर्थ जनतालाई अविश्वास गर्नु हो । जनादेशको अनादर गर्नु हो । हिजोसम्मका आफ्ना सम्पूर्ण भनाईहरूलाई अस्वीकार गर्नु हो ।
० हैन, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड त मोहन बैद्यको एजेण्डामा गैसकेको र पार्टी एकीकरणका लागि उहाँ संविधानसभाबाट बाहिरिन तयार भएको कुरा आइरहेका छन् नि ?
त्यो उहाँहरूको समस्या हो । तर मलाई लाग्दैन प्रचण्डजीहरू संविधानसभा छाडेर जानु हुन्छ भनेर । जानु भयो भने उहाँहरूलाई नै नोक्सान हुन्छ । संविधानसभाको नारा लगाएर उहाँहरूले यति ठूलो द्वन्द्व गर्नु भयो त्यो त देखाउने दात मात्रै रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
० तैपनि त्यस्तो भएमा मुलुक मुठभेडमा जान सक्छ नि ?
जाँदैन, जाँदैन । मुठभेडको अवस्था जनताले भोगिसकेका छन । हिंसाको लामो श्रृंखला जनताले भोगिसकेका छन । त्यो कालो युग जनताले देखिसकेका छन । अब त्यसलाई कसैले पनि स्वीकार गर्दैन ।
० त्यसो भए संविधान कहिले आउँला त ?
संविधान जेठ असारसम्ममा आउँछ । हामी त जेठ १५ भित्रमै संविधान ल्याउने पक्षमा छौ ।
० एउटा फरक प्रसंग, डा. गोविन्द केसीको अनसनमा यसअघि समर्थनमा रहनु भए पनि यसपटक मौन बस्नुभयो । यसलाई लिएर अनेक टिप्पणी भए । के भन्नुहुन्छ ?
म यो विषयमा मौन बसेको विल्कुलै हैन । डा. गोविन्द केसीले जुन माग राखेर विगतमा अनसन बस्नुभएको थियो त्यसको समर्थन गरेको हँु । सरकारमा आउने वित्तिकै उहाँहरूको माग संबोधन गर्न हामीले पहल गरेको हो । उहाँका त्यसबखतका मागहरू पनि पुरा भएका हुन् । कतिपय मागहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभमा छन । खास गरी नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने बारेमा नयाँ सम्बन्धन अहिले दिइनु हुँदैन र यस विषयमा माथेमा समितिले काम गरिरहेको छ । सम्बन्धनका मापदण्डहरू उसले निर्धारण गर्छ त्यसलाई सरकारले पूर्णतया लागु गर्नुपर्छ र गर्छ पनि ।
पार्टीभित्र संसदमा जस्तै बहुमतले अल्पमतलाई पेल्न खोज्यो (03.31.2015)
हामीसंग चाहिं सहमति गर्नुपर्दैन ? (03.17.2015)
विद्यार्थीको काम टायर बाल्ने र बन्द हड्ताल गर्ने मात्र हैन (11.11.2014)
पुष्प व्यवसाय विदेशी मुदा आर्जन गर्ने दरिलो माध्यम हो – कुमार कसजु श्रेष्ठ (10.21.2014)
त्यसबेला हामी लण्डनमा बसेर नेपालमा आगो बाल्छौं (09.23.2014)
विद्यार्थीको नेतृत्व खास विद्यार्थीले नै गर्नुपर्छ : शुभराम बस्नेत (09.09.2014)
हामीले कर नतिर्ने भनेका छैनौं - ज्ञानु गजमेर (09.02.2014)
बायोमेट्रिक प्रणाली संचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारी अरु भरपर्दो हुन्छ (08.13.2014)
अहिले नेपाललाई बिजुली, १० वर्षपछि नेपालबाट बिजुली : मोदी (08.04.2014)
संविधानमै बजेट ल्याउने तिथि निर्धारण गरिनुपर्छ (07.09.2014)
बहुमत प्रतिनिधि नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा (07.02.2014)
माधव र केपी दुबै सम्पूर्णता हैनन् (06.09.2014)
संसदीय सुनुवाईमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुले के भने (05.26.2014)
न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच टकराउको सन्देश गएको छ (05.19.2014)
एमाओवादीमा विचार कि संगठन प्राथमिक भन्ने द्विविधा छ - मुमाराम खनाल (05.12.2014)
स्वास्थ्यलाई पैसा कमाउने पेशा बनाइयो - डा. प्रवीण मिश्र, स्वास्थ्य सचिव (04.08.2014)
खेलकूद राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र विकासको आधार हो - खेलकूद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल (03.24.2014)
घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो हैसियत पनि छैन र वाध्यता पनि छैन- दिनानाथ शर्मा, प्रवक्ता एम� (03.19.2014)
कसैको प्रेरणाले होइन मेहनेतले गीतकार भए - गायत्री थापा (02.03.2014)
राष्ट्रियताको वैचारिक नेतृत्व हुन सकेन - मोदनाथ प्रश्रित (01.13.2014)